09/16/13 ~ Myanmar Forward
နျူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လုံးဝကင်းရှင်းသော နိုင်ငံအဖြစ် ဂျပန် ပြန်လည်ရပ်တည်
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးလည်ပတ်နေသည့် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီး (၂)ခုကို ပိတ်ပစ်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် အစီအစဉ်အတိုင်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ တနင်္ဂနွေနေ့က ဒုတိယ ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ပိတ်သိမ်းမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့
ဂျပန်နိုင်ငံသည် ဆယ်စုနှစ် အတော်များများအတွင်း နျူကလီးယား စွမ်းအင် အသုံးပြုမှု လုံးဝဥဿုံ ကင်းရှင်းသည့် အခြေအနေသို့ တစ်ကျော့ပြန် ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရှိရသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးလည်ပတ်နေသည့် နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီး (၂)ခုကို ပိတ်ပစ်မည်ဟု ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် အစီအစဉ်အတိုင်း လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ တနင်္ဂနွေနေ့က ဒုတိယ ဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ပိတ်သိမ်းမှုများ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တတိယ အကြီးမားဆုံး စီးပွားရေး အင်အားစုကြီးအဖြစ် ရပ်တည်နေသော နိုင်ငံသည် နျူကလီးယား စွမ်းအင်ကို လုံးဝ မမှီခိုဘဲ အနာဂတ် ရှေ့ဆက်တော့မည် ဖြစ်သည်။ (၂၀၁၁)ခုနှစ်၊ မတ်လက ဖူကူရှီးမား ဓာတ်ပေါင်းဖို ယိုစိမ့်မှုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံအတွင်းရှိ နျူကလီးယား စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍကို လုံခြုံရေးအရ ပြန်လည် စီစစ်ရန် တာဝန်ရှိသူများက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဂျပန် ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက နိုင်ငံအတွက် နျူကလီးယား စွမ်းအင် ဆက်လက် အသုံးပြုရန် အလေးအနက် ထောက်ခံထားသော်လည်း ပြည်သူအများစုက ဖူကူရှီးမား ပြဿနာနောက်ပိုင်း ယင်းကဏ္ဍတွင် ကန့်ကွက်မှု အားကောင်းလာခဲ့သည်။ ဖူကူရှီးမားတွင် ငလျင်နှင့် ဆူနမီ ရေလှိုင်းများ နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဖူကူရှီးမားဒိုင်ချီ ဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီး ယိုစိမ့်ခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်ရပ်သည် (၁၉၈၆)ခုနှစ်၊ ချာနိုဘိုင်းလ် ပြဿနာနောက်ပိုင်း အကြီးကျယ်ဆုံး နျူကလီးယား ကပ်ဆိုးလည်း ဖြစ်လာသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကန်ဆိုင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဌာနသည် ဖူကူအိုင်ရှိ အွိုင်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံမှ ဓာတ်ပေါင်းဖို အမှတ်(၄)ကို အဆင့်ဆင့် စတင်ပိတ်ချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်စဉ်သည် တနင်္လာနေ့ နံနက်ထိ အချိန်ယူခဲ့ရသည်။ ဂျပန်သည် (၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ မေလကတည်းက နျူကလီးယား ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို တစ်ခုချင်းစီ ပိတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ စီးပွားဖြစ် ဓာတ်ပေါင်းဖိုကြီး (၅၀)လုံး ရပ်ဆိုင်းနေပြီ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဓာတ်ပေါင်းဖို အားလုံးတွင် လုံခြုံရေးစံနှုန်း စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နျူကလီးယား စွမ်းအင်ကို လုံးဝ မမှီခိုခြင်းသည် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကြုံရခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုတစ်ကြိမ်သည် နှစ်ပေါင်း(၄၀)မျှအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဟုလည်း သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
မျက်စိ ယားယံမှုနဲ့ ဓာတ်မတည့်မှု တို့ကြောင့် မျက်လုံးကို လက်နဲ့ မကြာခဏ ပွတ်သပ်မိရာက မျက်လုံးဖောင်းအစ် မှုတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်စေ ဖို့ အောက်ပါနည်း ငါးမျိုးကို လိုက်နာသင့် ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက် အိမ်မက်နဲ့ လက်တွေ့ဘဝ ထပ်တူကျတယ်ဆိုတဲ့ ဖြူထိပ်ထား
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under အနုပညာ | No comments
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ဆယ် ကျော်သက်ဘဝက ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့စိတ် ကူးတွေ၊ မျှော်လင့်ချက် တွေရှိခဲ့ ကြမယ်ထင် ပါတယ်။ တချို့လည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူး အတိုင်း ဖြစ်ခဲ့တာရှိ သလို၊ တချို့လည်း စိတ် ကူးနဲ့ထပ်တူ မကျတဲ့ လက်တွေ့ ဘဝကို ရောက်နေကြရတာ တွေရှိ ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် တုန်းက ဖြစ်ချင်ခဲ့ တာဘယ် လို.. ဆိုပြီး ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမယ့် အနုပညာရှင် များရဲ့ဆယ်ကျော် သက်ဘဝက စိတ်ကူးတွေအကြောင်း ကို တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက အဆိုတော် မင်းသမီး ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ
ဆယ်ကျော်သက် တုန်းက အ ဆိုတော်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ မင်း သမီးလည်းဖြစ်ချင်တယ်။ နှစ်ခုစ လုံးအရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာ။ ငယ်ငယ် လေးကတည်းက အဆိုတော်မင်း သမီးပဲဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဆယ် ကျော်သက်ကအိပ်မက်တွေနဲ့ လက် ရှိဘဝကထပ်တူကျတယ်။ ကိုယ်ဖြစ် ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာ တဲ့အတွက် ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါ တယ်။
ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့ ဘဝမှာ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်တဲ့ သူတွေကို အကြံပေးစကား
လောကကြီးမှာ တစ်ခါတလေ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကိုဦး စားပေးပြီး လုပ်ရတယ်။ ကိုယ်ကဖြစ် ချင်တာကိုမလုပ်ရဘဲ ဖြစ်သင့်တာ ကိုလုပ်ရတဲ့အတွက် တစ်ခါတလေ စိတ်ညစ်မယ်။ ဒီအလုပ်ကို ကိုယ်က မလုပ်ချင်တော့ နည်းနည်းလေး ဒီအလုပ်မှာ ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ် လိုက်တာနဲ့ ဒီအလုပ်ကငါနဲ့မှအဆင် မပြေတာ။ ဒါကြောင့် ဟိုအလုပ်ကို လုပ်ချင်တာ။ အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ် တာပေါ့။ ဘယ်အလုပ်မဆို အခက် အခဲရှိတာပဲ။ ကိုယ်ဝါသနာပါလို့အ ခက်အခဲမရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ဝါသ နာပါတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ဝါ သနာမပါတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အ ခက်အခဲဆိုတာ အမြဲတမ်းရှိတယ်။ ကိုယ်ဝါသနာမပါပေမယ့် အခုလုပ် နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ထားလိုက် ပါ။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ ဒီအလုပ်က ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်လို့၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာပါလာ လို့လုပ်ရတဲ့အတွက် အလုပ်ကိုစိတ် နှစ်လိုက်ရင် အကုန်လုံးကအဆင် ပြေသွားမှာပါ။
ကိုယ်မျှော်လင့် ထားတဲ့ နေရာကို ရောက်ဖို့ စိတ်တိုင်း မကျသေးဘူး
အခုလက်ရှိ အနေအထားကို မကျေနပ်သေးပါဘူး။ ကိုယ်မျှော် လင့်ထားတဲ့နေရာတစ်နေရာ၊ ကိုယ် မျှော်လင့်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီမျှော်လင့်ထားတဲ့နေရာကို ရောက်ဖို့အတွက် စိတ်တိုင်းမကျ သေးဘူး။
ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက ထိန်းချုပ်ခံရတာတော့ မရှိဘူး
ဆယ်ကျော်သက် တုန်းက မိဘ တွေထိန်းချုပ်တာ မခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒါ ပေမဲ့ တစ်ချိန်လုံးလည်း ရိုက်နေရ တာပဲ။ တစ်ခါတလေ ကန်တော် ကြီးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သီချင်းဆို တယ်။ သီချင်းတွေ ရေးတယ်။ မိန်း ကလေးကျောင်းတက်တာ ဆိုတော့ ဖြူပေါင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ယောက်ျားလျာတွေလေ။ယောက်ျား လျာဆိုတော့ သူတို့က ဂစ်တာတီး တတ်တယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့ ကျောင်းဆိုရင်လည်းပြေး လိုက်တယ်။ သီချင်းတွေ သွားဆိုကြတော့ အမေ ကပြန်လာရင်ရိုက်တာတော့ ရှိတယ်။ ဟိုမသွားရ၊ ဒီမသွားရ ဆိုပြီးတော့မ ရှိဘူး။ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် စိုင်းစိုင်း ခမ်းလှိုင်ရှိုးဆို ဆယ်တန်းဖြေခါနီး အထိသွားတယ်။
ဆိုးသွမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်မိဘက လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှာလဲ
မိဘတွေက သားသမီးဘာ ဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကြည့်ဖို့လိုသလို၊ သားသမီးတွေကလည်း မိဘတွေ ငါ့ကိုဘယ်လိုအတိုင်းအတာထိဖြစ် စေချင်တာလဲဆိုတာကိုလည်း သိဖို့ လိုတယ်။ မိဘစကားကိုလည်းနား ထောင်ရမယ်။ ကိုယ်ကအရမ်းဆိုး သွမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်မိ ဘက လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှာလဲ။ မိဘ တွေလည်းအမြင်ကြည်ရမယ်။ ကိုယ် လုပ်ချင်တာကိုကိုယ်လုပ်လို့ရအောင် လို့ နေတတ်၊ ထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်မိဘကမှခွင့်မပြုတာမရှိပါဘူး။
အမှားသိမှ အမှန်ပြင်နိုင်မှာ ဆိုတော့ လွှတ်ပေးသင့်တဲ့ ကိစ္စကို လွှတ်ပေးပါ
မိဘတွေကတော့ သူတို့အရင် ကကြုံတွေ့လာရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ကိုသိနေတော့ ကိုယ့်သားသမီးကို အခက်အခဲတွေမကြုံတွေ့စေချင်ဘူး ပေါ့။ သူတို့ကတော့ကြိုမြင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း လူငယ်တွေက အဲဒီ အခက်အခဲကို သိတော့မှပဲ တစ်ခါ တလေ အမှားသိမှအမှန်ပြင်နိုင်တဲ့ လူတွေရှိတယ်။ အရမ်းကြီးတဲ့အ မှားတော့ မဟုတ်ပေမယ့် မိဘက ဒီ အမှားလေးတွေ လုပ်ဖို့လွှတ်ပေး လိုက်မယ် ဆိုရင် မှားတာသိမှအမှန် ပြင်လို့ရမှာလေ။ မိဘတွေက လွှတ် ပေးသင့်တဲ့ ကိစ္စကျရင် လွှတ်ပေးရ တယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီး အလျော့ အတင်းပုံစံမျိုးလေးနဲ့ သွားသင့်ပါ တယ်လို့အကြံပေးချင် ပါတယ်။
အမေရိကန်မယ်အဖြစ် အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အလှမယ် ပထမဆုံးအကြိမ် အောင်ပွဲခံ
အမေရိကန် အလှမယ် ရွေးချယ်ပြိုင်ပွဲတွင် နယူးယော့ခ်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု နီနာဒါဗူလူရီက ဗိုလ်စွဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
အသက်(၂၄)နှစ်ရှိ နီနာသည် အမေရိကန် အလှမယ်ရွေးပွဲတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ဗိုလ်စွဲသည့် အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ဖြစ်သည်။ သူမသည် နယူးယော့ခ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အလှမယ်များ (၂)နှစ်ဆက် ဗိုလ်စွဲစေသူလည်း ဖြစ်လာသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့က အတ္တလန္တိတ် စီးတီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြိုင်ပွဲကို ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနအများအပြားက တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သည်။ နီနာသည် ယမန်နှစ် အလှမယ်ဆုရှင်ဖြစ်သူ နယူးယော့ခ်ပြည်နယ် ကိုယ်စားပြု မာလိုရီဟာဂန်ထံမှ သရဖူကို
အမေရိကန် အလှမယ် ရွေးချယ်ပွဲကို လာ့စ်ဗီးဂက်စ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး (၆)နှစ်ကြာ ကျင်းပခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် အတ္တလန္တိတ် စီးတီးတွင် ပြန်လည် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ နီနာသည် တစ်ဦးချင်း စွမ်းရည်ပြသ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် အိန္ဒိယ ဘောလီးဝုဒ်ဟန် ပေါင်းစပ်သော အကဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ယခုပြိုင်ပွဲတွင် ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားပြု အလှမယ် (၅၃)ဦး ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်၏ ပြည်နယ်(၅၀)အပြင် ကိုလံဘီယာခရိုင်၊ ပွာတိုရီကိုနှင့် အမေရိကန် ဗာဂျင်အိုင်းလန်းတို့မှ ကိုယ်စားပြု အလှမယ်များလည်း အသီးသီး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အတ္တလန္တိတ် စီးတီးတွင် ပြိုင်ပွဲကျင်းပဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပရေး ကော်မတီ အမှုဆောင်ချုပ် ဆမ်ဟက်စ်ကဲလ်က "ကျွန်တော်တို့ ပိုင်ဆိုင်သင့်တဲ့ အရာပါပဲ။ ဒါဟာ အမေရိကန်မယ် ရွေးချယ်
ပွဲရဲ့ အိမ်လို့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပြိုင်ပွဲဟာ ဒီမှာပဲ အခြေချသင့်ပါတယ်"ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆုကို ကယ်လီဖိုးနီးယား ကိုယ်စားပြု ခရစ္စတယ်လီ၊ တတိယဆုကို အိုကလာ
ဟိုးမား ကိုယ်စားပြု ကဲလ်ဆီဂရစ်ဝိုးလ်တို့က အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
အွန်လိုင်း အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့် ၁၂ နှစ်သမီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေ
ဖလော်ရီဒါ အလယ်ပိုင်းရှိ ကျောင်းသူတစ်ဦးသည် လပေါင်းများစွာ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီး ခြိမ်းခြောက် အနိုင်ကျင့်ခံရပြီးနောက် စိတ်ဓာတ်ကျကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားကြောင်း ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် အာဏာပိုင်များက ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း Reuters သတင်းတွင် ရေးသားထားသည်။
အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ရေဘက်ကာအန်းဆက်ဝစ် ဆိုသူသည် မိမိနေထိုင်ရာ လိခ်လန်းမြို့ရှိ စွန့်ပစ်ထားသော အဆောက်အအုံတစ်ခု အပေါ်ထပ်ကနေပြီး ခုန်ချကာ သတ်သေသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယင်းသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆက်ဝစ်သေဆုံးရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အခြားကျောင်းသူ တစ်ဒါဇင်ခန့်ကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပို့ခ်ကောင်တီ ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူ ရဲအမှုထမ်း ဂရက်ဒီဂျပ်က ပြောကြားသည်။ မိမိတို့အနေနှင့် ခြေရာခံမိသလောက် လိုက်လံစုံစမ်းနေရာ အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဂရက်ဒီက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဆက်ဝစ် သေဆုံးရမှုတွင် ပတ်သက်နေသူနှစ်ဦး၊ သုံးဦးခန့် ရှိကြောင်း၊ မိမိတို့ ယူဆသကဲ့သို့ အွန်လိုင်းပေါ်ကတစ်ဆင့် ခြိမ်းခြောက် အကျပ်ကိုင်မှုကြောင့် သေဆုံးရခြင်းဖြစ်လျှင် ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆိုက်ဘာ ခြိမ်းခြောက်မှုဥပဒေ သို့မဟုတ် ဆိုက်ဘာ အကျပ်ကိုင်မှု ဥပဒေများကို ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ရန် လိုအပ်လာပြီဟု တိုက်တွန်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒွန်နာဝုဒ်ကလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရေဘက်ကာ၏ အွန်လိုင်း လူမှုရေးကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်တွင် “နင်သေမယ်” “နင်ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်မသေသေးတာလဲ” စသည့် ရေးသားချက်များကို တွေ့ရကြောင်း၊ သတ်မသေမီနေ့က ရေဘက်ကာသည် စိတ်ဓာတ် အကြီးအကျယ် ကျလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ သူ့အွန်လိုင်း စာမျက်နှာပေါ်တွင်လည်း အကြမ်းဖက် ရက်စက်စွာ ရေးသားထားသည့် စာများဖြင့် ပြည့်နေကြောင်း Reuters သတင်းထောက်က ပြောကြားသည်။
ရေဘက်ကာနှင့် သူမ၏ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူတို့သည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက ရည်းစားလုဖက်အဖြစ် ပြဿနာ တက်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သတ်သေခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက် ပေါ်ပေါက်စေရန် အကျပ်ကိုင် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဂျပ်က ဆိုသည်။
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under မှုခင်း | No comments
၁၂.၉.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၂၂၀၀အချိန် အလုံမြို့နယ်နေပေါ်ပြူလာနယူးစ်ဂျာနယ်အယ်ဒီတာချုပ် ဦးဖိုးနိုင်လင်းသည် နေအိမ်၌
အလုပ်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ပြီး အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာမှ ၁၃.၉.၂၀၁၃ရက်နေ့
၀၃၀၀ အချိန်ခန့်တွင် ဦးဖိုးနိုင်လင်း၏ဇနီးမှ အိပ်ယာမှနိုးစဉ် အခန်းရှိပစ္စည်းများအား စစ်ဆေးကြည့်ရာ စားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသည့် ASUS အမျိုးအစား Laptop Computer(၁)လုံး ၊ ဆင်းကဒ်ပါလက်ကိုင် ဖုန်း(၂)လုံး၊ ငွေကျပ်(၅၀၀၀၀)ပါပိုက်ဆံအိတ်(၁)လုံး၊ စုစုပေါင်းတန်ဘိုးငွေကျပ် (၄၀၀၀၀၀)ခန့်မှာ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း
တွေရှိရသဖြင့် ဦးဖိုးနိုင်လင်းမှစုံစမ်းအရေးယူပေးပါရန် တိုင်တန်းခဲ့၍ အလုံမြို့မရဲစခန်း(ပ)၂၂၆/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၈၀ဖြင့် အမှုဖွင့်စုံစမ်း
အလုံမြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အမှုမှပါဆုံးပစ္စည်းများအား ကျောက်တံတား
မြို့နယ်ရှိ Mobileဖုန်းဆိုင်သို့ လူငယ်(၁)ဦးမှလာရောက်ရောင်းချ သွားကြောင်းသိရှိရသဖြင့် ၄င်းလူငယ်အား စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာ သာကေတမြို့နယ်၊ အောင်သပြေလမ်းနေ နေလင်းဦး၊ (ဘ)ဦးဝင်းထွဋ်
ဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရ၍ ၎င်းအား ၁၄.၉.၂၀၁၃ရက်နေ့ ၁၅၃၀အချိန်
၎င်းအားစစ်ဆေးရာ အဆိုပါအမှုအား လမ်းမတော်မြို့နယ်၊
အမှုမှ သက်သေခံပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ASUS အမျိုးအစား
Laptop Computer (၁)လုံး ၊ ဆင်းကဒ်ပါ လက်ကိုင်ဖုန်း(၂)လုံးတို့အား
ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီး နေလင်းဦးနှင့် အာကာဖြိုးတို့အား
ကျောက်ဖြူ နှင့် အမ်းမြို့နယ် တွင် တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တရားဝင်ပါတီမဟုတ်ဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးပြော
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဦးတင်အေး (ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဌ)
ရန်ကုန် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၅
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီအမည်ဖြင့် ပါတီမှတ်ပုံတင် မရှိသည့်အတွက် အဆိုပါ ပါတီ သည် တရားမဝင်ပါတီသာဖြစ် ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က ပြော သည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ ပြည် ခိုင်ဖြိုးပါတီအမည်ဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပါတီဆိုင်းဘုတ်ထောင် ထားကြောင်း ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဦးလှမြင့်က နိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့် မီဒီယာနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲ တွင် ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့သည့်အပေါ် မီဒီယာများမှ ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအား မေးမြန်းရာတွင် အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က ''မှတ်ပုံမတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တရားမဝင်ပါတီပဲဖြစ် ပါမယ်။ ကော်မရှင်အနေနဲ့ အရေး ယူခွင့်မရှိပါဘူး။ တရားမဝင်ပါတီ ဖြစ်ရင် နယ်ဘက်ဥပဒေအရပဲ အရေးယူ လို့ရပါ တယ်။ တိုင်လာ တောလာ ရင်တော့ အရေးယူရ ပါမယ်။ တရားမဝင်ပါတီက ဆိုင်း ဘုတ်ထောင်ထားတယ်ဆိုပြီး တိုင် လာရင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် တွေကို အကြောင်းကြားရမယ်။ ဥပဒေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက် ပေးပါလို့ဆိုရင် နယ်ဘက် က ဥပဒေ နဲ့ အရေးယူရမယ့်ကိစ္စပါ''ဟု ပြော သည်။
အဆိုပါရခိုင်တိုင်းရင်းသား များ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအမည်ဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်များကို ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ်နှင့် အမ်းမြို့ နယ်တို့တွင် တွေ့ရှိရကြောင်း ဦးဦး လှမြင့်ထံမှ သိရသည်။ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဦးလှ မြင့် က ''ဒီလိုလုပ်တာဟာ ကွက် ကြားမိုးရွာနေတာဖြစ်တယ်။ ရိုး သားမှု အားနည်းတယ်လို့ထင်ပါ တယ်။ ဒီဆိုင်းဘုတ်တွေက ပြည် ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးတွေမှာ ထောင်ထား တာ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ ခဲ့တယ်။ ကျောက်ဖြူမှာ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တွေ့ခဲ့တယ်။ ဓာတ်ပုံလဲ ရိုက်လာခဲ့တယ်''ဟု ပြောသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုး တက်ရေး ပါတီမှ ဦးသာထွန်းလှ က ''ကျွန်တော်တို့လဲ အဲဒီကိစ္စ ကြားပါတယ်။ အဲဒါကို တိတိကျ ကျဖြစ်အောင် စုံစမ်းနေပါတယ်။ တွေ့တာက ကျောက်ဖြူနဲ့ အမ်း ဘက်မှာလို့တော့ သိရတယ်။ ကျွန် တော်တို့ တိတိ ကျကျ သိရရင် တော့ ကော်မရှင်က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သက်ပြီး မှတ်ပုံမတင်ဘဲ ပါတီဆိုင်း ဘုတ်စိုက်ထူခွင့် ရှိ မရှိနဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေအရ ကော်မရှင်က ဘယ်လို ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆို တာတွေ မေးသွားမှာပါ''ဟုပြော သည်။ တရားမဝင် ပါတီ ဆိုင်း ဘုတ် တင်ထားခြင်းသည် ဥပဒေချိုး ဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပါတီ မှ နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေနှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ ပါတီ တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထား ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုလုပ်လာ ပါက ဥပဒေနှင့်ညီညွတ်လျှင် ခွင့် ပြု သွား မည်ဖြစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူ များရှိပါကလည်း စိစစ်ပြီး ဥပဒေ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းမီဒီယာများ ၏ မေးမြန်းမှုအပေါ် ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြောသည်။
ယုဇနပလာဇာတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ပရလောကသား ဝင်ပူးပြီး နေရာထိုင်ခင်းတောင်းဟု ဆရာတော်မိန့်ကြား
အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တကုသလ။ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘဒ္ဒန္တကုသလ။
ယုဇန ပလာဇာတွင် တရားနာနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ပရလောက သားတစ်ဦးက ဝင်ရောက်ပူးကပ် ပြီး နေရာတောင်းခဲ့ကြောင်း အ ဆိုပါပဋ္ဌာန်းတရားပွဲကို ဦးဆောင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည့် နတ်မောက် ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ထံမှ သိ ရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ယုဇန ပလာဇာ ခုနစ်လွှာတွင် စက်တင် ဘာ၈ရက်မှ၁၂ရက်အထိ ပြုလုပ် ခဲ့သည့် ပထမဆုံးအကြိမ် ပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ နောက် ဆုံး နေ့ တွင် တရားပွဲ အပြီး ကမ္မဝါရွတ် ချိန်၌ ရေစက်ချအမျှဝေမည့် ဈေး သူ၊ ဈေးသားများထဲမှ တရားနာ နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ပရလောကသားက ဝင်ရောက် ပူးကပ်ပြီး ယုဇနပလာဇာတွင် နေ ထိုင်ရန်အတွက် နေရာ တောင်း ခဲ့ ခြင်းဖြစ် ကြောင်း အဆိုပါတရား ပွဲတွင် ကမ္မဝါရွတ်ဖတ်ခဲ့သည့် နတ် မောက်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကုသလထံမှ သိရသည်။
''တရားပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြတ်သွားဖြတ် လာလုပ်တာ တွေ့နေတယ်။ ဘုန်း ကြီးတို့ တရားပွဲပြီးလို့ ကမ္မဝါမ ဖတ်ခင် အမိန့်ပြန်တမ်းသဘော မျိုး ရေစက်ချအမျှဝေပွဲကိုဖိတ်တဲ့ အချိန်မှာ စပြီးဝင်လာတာပဲ။ ပထမ ဘာဖြစ် မှန်း မသိဘူး။ နောက်မှ သိလို့ခေါ်တော့ ဘုန်းကြီးဆီကို လာတယ်။ လက်အုပ်ချီတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ မကန်တော့ဘူး''ဟု ဆရာ တော်ကဖြစ်စဉ်ကို မိန့်ကြားသည်။ မွန်းလွဲ ၁နာရီဝန်းကျင်တွင် တရားလာရောက်နာယူသည့် ဈေးရုံအောက် ဆုံးထပ် အထည် ဆိုင်မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ဝင် ရောက်ပူးကပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆရာ တော်များ ကမ္မဝါဖတ်ချိန်တစ် လျှောက်လုံး ပရလောကသားပူး ဝင်နေသည့်အမျိုးသမီးသည် ငို နေကာ ကမ္မဝါပြီးဆုံးချိန်တွင် သာဓုမခေါ်ဘဲ ကျယ်လောင် သည့် အသံ များ ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပဋ္ဌာန်းရွတပေးသည့် နတ် မောက်ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာ တော်အပါအဝင် သံဃာ၁၁ပါး အနက်မှ ဦးပဉ္ဇင်းတစ်ပါးက ''အ သံကြီးက 'ဝူးဝူးဝါးဝါး'နဲ့ ဘယ်လို မှန်းကိုမသိဘူး။ သာမန်လူတွေ ထက် အများကြီးကျယ်တဲ့အသံ နဲ့အော်တာ''ဟု တွေ့ကြုံခဲ့ရမှုကို မိန့်ကြားသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်တွင် ဝင်ရောက် ပူးကပ်ခဲ့သည့် ပရလောကသား က ယင်းသည် ယခုတရားပွဲပြုလုပ် သည့် ခုနစ်လွှာတွင်နေထိုင်ကြောင်း၊ အပေါ်ဆုံးအလွှာတွင် နောက်ထပ် ငါးဦးရှိကြောင်း၊ ယင်းအနေဖြင့် ယုဇနပလာဇာ တွင် ဆက်လက် နေထိုင်လိုသည့်အတွက် နှင်မထုတ် ရန် ဆရာတော်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
နတ်မောက်ဆရာတော်က ''သူကနေထိုင်ခွင့် ဆက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချိန်မှာ ဈေးတာဝန်ခံ ကိုမေးပြီး သဘောတူညီမှုရတဲ့အ တွက်ဆက်နေဖို့၊ ဈေးမှာအနှောင့် အယှက်မပြုဖို့၊ နှောင့်ယှက်ရင် ထွက်ခွာရမယ်ဆိုတာတွေ မှာတော့ ခေါင်းညိတ်ပြီးလက်ခံတယ်။ နောက် တော့ တရားပွဲလုပ်တဲ့နေရာက နေ နောက်ပြန်ဖင်တရွတ်တိုက် သွားပြီး သူနေတဲ့နေရာလောက် မှာ အပူးခံရတဲ့အမျိုးသမီးလေး က မူးလဲသွားတယ်။ သတိရလာ တော့ သူ့ကို လူတွေဝိုင်းကြည့်နေ တာကြည့်ပြီး သူလဲကြောင်နေ တာပေါ့။ သူက ဘာမှမသိဘူး''ဟု ဖြစ်ပျက်ပုံကို မိန့်ကြားသည်။ ယခုဖြစ်ရပ်သည် ဆရာတော် အနေဖြင့် ပထမဆုံးကြုံရသည့် မဟုတ်ဘဲ မင်္ဂလာဈေးသစ်တည် ဆောက်ချိန်ကလည်း ပထမဆုံး တရားပွဲတွင် ကြုံခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းသည့်အမူ အရာများကို ထိုအချိန်ကမကြုံခဲ့ ရကြောင်း မိန့်ကြားသည်။
နတ်မောက်ဆရာတော်က ''ဘုန်းကြီးတို့ ရေစက်ချ၊ ကမ္မဝါ ဖတ်ဖို့ အမိန့်ကြေညာချိန်မှာ အ ပေါ်ဆုံးထပ်မှာဆိုရင် တိုက်ပေါ် မှာကလေးတွေ ဘောကန်နေသလို တဝုန်းဝုန်းနဲ့ ပြေးနေတဲ့အသံတွေ လဲကြားခဲ့ရတယ်''ဟု မိန့်ကြား သည်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးကို ဝင် ရောက်ပူးကပ်ချိန်တွင် တရားလာ ရောက်နာယူသည့် ပရိသတ်သုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်က ကြောက်လန့်ထ ပြေးကြကြောင်း၊ ပရလောကသား ပူးကပ်ခံရသူသည် နာရီဝက်ခန့် ထိုင်ပြီး တရားပွဲကိုနာယူခဲ့ကြောင်း ဈေးထဲမှတရားနာခဲ့သူများထံမှ သိရသည်။ ဆရာတော်က ယခုဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ဈေးသူဈေး သားများအနေဖြင့် ကြောက်ရွံ့မှု မဖြစ်ကြရန်နှင့် နေထိုင်စရာအ ခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေသည့်အတွက် အကူအညီ တောင်းခံခြင်းဖြစ်ပြီး ဈေးသူ၊ ဈေးသားများကို နှောင့် ယှက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း မိန့်ကြား သည်။
''ဒီလိုဖြစ်ရပ်က အခုမှကြုံ ဖူးပေမယ့် ဒီသရဲဆိုတာ တကယ် ရှိတယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးအရ အရင်ကတည်းကသိပြီးသားပဲ။ အခုက ဝင်ပူးပြီး နေစရာတောင်း တာပါ။ ဆရာတော်တွေကလဲ ခုနစ်လွှာမှာ ကောင်းမွန်စွာနေဖို့ မှာပြီးပေးလိုက်ပါတယ်။ ထူးဆန်း ပေမယ့် သရဲဆိုတာတကယ်ရှိနေ တယ်''ဟု ယင်းဖြစ်ရပ်ကို ကိုယ် တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အဝတ်အ ထည်အရောင်းဆိုင်တစ်ခုမှ ဆိုင် ရှင်ကပြောသည်။ အဆိုပါယုဇနပလာဇာတွင် ညဘက်တာဝန်ကျ လုံခြုံရေးဝန် ထမ်းများနှင့် သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း များကိုပူးကပ်ပြီး နေရာတောင်း ခြင်း၊ စကားပြောခြင်းဖြစ်ရပ်များ ရှိခဲ့ဖူးပြီး ယခုကဲ့သို့ အများသူငါ ရှိနေသည့် တရားပွဲတစ်ခုတွင် ဝင် ရောက်ပူးကပ်ပြီး နေရာတောင်း ခြင်းသည် ပထမဆုံးဖြစ်ရပ်ဖြစ် ကြောင်း ယုဇနပလာဇာမြေညီ ထပ်ရှိ ဆိုင်ခန်းရှင်တချို့က ပြော သည်။
ရေစက်ချပွဲကိုတက်ရောက် ခဲ့သည့် မြေညီထပ်ဆိုင်ခန်းတစ်ခု မှ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ''အမျိုးသမီး ကို ပူးကပ်ပြီးနေရာတောင်းတာ ရေစက်ချပွဲပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ဆရာ တော်က သူတို့ကို ခုနစ်လွှာမှာ နေဖို့ နေရာပေးလိုက်မှထွက်သွား တယ်''ဟု ဖြစ်ရပ်ကိုပြောသည်။ ယင်းအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်အချက် အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ပဋ္ဌာန်းပွဲကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် သည့် ဈေးတာဝန်ခံရုံးကို သွား ရောက်စုံစမ်းခဲ့သော်လည်း တာဝန် ကျဈေးတာဝန်ခံများက အသေး စိတ်ဖြေကြားလိုခြင်းမရှိဘဲ ဈေး တာဝန်ခံရုံး၏ ပြောကြားနိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ် ရုံးပြန်တက်မည့်နောက် တစ်ရက်ကိုသာ ပြန်လည်ချိန်းဆို ခဲ့သည်။
ယုဇနပလာဇာဒုတိယထပ် ရှိဈေးတာဝန်ခံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ''သရဲခြောက်လို့ ပရိတ် ရွတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမဆုံး ဆိုပေမယ့် ပုံမှန်အတိုင်းပဋ္ဌာန်း ပွဲကျင်းပတာပါ။ သရဲပူးကပ်မှုဖြစ် စဉ်တွေက အမှန်ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အ သေးစိတ် ကို ပြောခွင့်မရှိတဲ့အ တွက် နောက်ရက်ဈေးတာဝန်ခံ လာမှ လာခဲ့ပါ''ဟု ပြောသည်။
ကျော်ဇေယျ ၊ ငယ်ထွေး
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ခရစ်နှစ် ၁၈၉၈ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတရားဥပဒေများ ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေတွင် အမှုသည်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဥပဒေ၊ မဟောမေဒင်ဖြစ်လျှင် မဟာမေဒင် တရားဥပဒေ၊ ဟိန္ဒူဖြစ်လျှင် ဟိန္ဒူတရားဥပဒေအရ အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်ဟု ပြဌာန်းထားသော်လည်း အမှုသည်များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မဟာမေဒင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူစသည်ဖြင့် ဖြစ်လာပါက မည်ကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ရမည်ကိုကား မပါဝင်ခဲ့ပေ။
အလုပ်ခွင်မပျက် ပညာသင်ကြားရင်း ဘွဲ့နှစ်မျိုး ရယူနိုင်
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under ဗဟုသုတ,သတင်းများ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု (Education Services) အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့် အရည်အသွေး စံချိန်မီ ISO လက်မှတ် ရရှိထားသော MCC Training Institute အနေဖြင့် ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလက နေပြည်တော် ဒေသတွင် Campus တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဖြစ်ရာ အဆိုပါ Campus တွင် ပုံမှန်တန်းခွဲများ သာမက အလုပ်ခွင်မပျက် ပညာသင်ကြားလိုသူများ အတွက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ (Part Time) သင်တန်းများပါ တက်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း MCC.i နေပြည်တော် Campus မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
Part Time သင်တန်းကြေး အနေဖြင့် ပုံမှန်ထက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေပြီး အချိန်အားလပ်ရက် မရသော ဝန်ထမ်းများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေသူများကို ကျောင်းတက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ပထမနှစ်အတွက် ကျပ်ခုနစ်သိန်း၊ ဒုတိယနှစ်အတွက် ကျပ်ကိုး သိန်းခွဲနှင့် တတိယနှစ် အတွက် ကျပ် ၁၈ သိန်းခွဲ သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ စာမေးပွဲအတွက် ဗြိတိသျှ ကောင်စီမှ သတ်မှတ်ထားသော ပညာသင်အတန်းလိုက် ကျသင့်မှု ရှိကြောင်း သိရသည်။
"Part Time မှာတော့ ပုံမှန် တန်းခွဲတွေမှာ ပါတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ On Job Training မပါဝင်ပါဘူး။ ဒါကလည်း ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့သူတွေကပဲ တက်တဲ့ သင်တန်းဆိုတော့ ကျန်တာကတော့ ပုံမှန်တန်းတွေ သုံးရက်နဲ့ တတ်တဲ့ သင်ခန်းစာကို နှစ်ရက်နဲ့ လိုက်သင်ရတဲ့ သဘောပဲ ရှိပါတယ်။ သင်တန်းချိန်ကတော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နံနက် ၉ နာရီ ကနေ၊ ညနေ ၄ နာရီအထိပါပဲ” ဟု တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
တက်ရောက်နိုင်မည့် ဘွဲ့သင်တန်းများမှာ B.SC (Hons) Business IT Course နှင့် B.SE Engineering Course နှစ်ခုဖြစ်သည်။ MCC.i Nay Pyi Taw Campus ဖုန်း - ၀၆၇-၄၂၁၆၁၇ Ext : 108 နှင့် ၀၆၇-၄၂၁၃၄၅ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၃၆)
၄၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားကြီးတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချအဆုံးစီရင်
အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး ကြိုးဆွဲချပြီး မိမိကိုယ်ကို သတ်သေ ခဲ့မှု တစ်ခု ဒဂုံတောင်မြို့နယ်တွင် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ယင်းနေ့ နံနက် ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင် ဒဂုံတောင်မြို့နယ် ၇၀ ရပ်ကွက်တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် ထားသည်ကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းရရှိခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် သွားရောက်စစ်ဆေးအတည်ပြုခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ဦးတင်မောင်ဖြစ်ပြီး နေအိမ်အောက်ထပ် ဧည့်ခန်းအတွင်း အမြင့်ခြောက်ပေကျော်ရှိသော ထုတ်တန်းတွင် အစိမ်းရောင် ပလစ်စတစ်ကြိုးကို လည်ပင်းတွင်ကြိုးကွင်းစွပ်ပြီး ဒူးထောင်လျက် အနေအထားဖြင့် သေဆုံးနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရဲဌာနကဆိုထားသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများအား စစ်ဆေးရာတွင် ၎င်းအမျိုးသားသည် နေအိမ်အောက်ထပ်တွင် တစ်ဦးတည်း နေထိုင်သူ ဖြစ်သည်ဟု ကနဦး စစ်ဆေးချက်များအရ သိရှိထားရသည်ဟုဆိုသည်။ အလောင်းကို စစ်ဆေးရာတွင်လည်း အခြားပြင်ပဒဏ်ရာများ မတွေ့ရှိသဖြင့် မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံသို့ ပို့အပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု ရဲမှုခင်း မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုအမှုကို အမှန်တကယ် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်းဟုတ်၊ မဟုတ် ဆက်လက်စစ်ဆးမည်ဖြစ်သဖြင့် မြို့နယ်ရဲ စခန်းက သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် ၄၃/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး ဒုရဲမှူး အောင်ဆန်းဦးက စစ်ဆေးနေကြောင်း ရဲဌာနကထုတ်ပြန်ထားသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ဖြေထောက် ဖောရောင်မှု သက်သာစေရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မှာ ခြေထောက်ဖောရောင်မှု အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီလို ဖောရောင်မှု မဖြစ်စေဖို့ နေထိုင်မှု ပုံစံပြောင်းလဲ ပေးသင့်ပါတယ်။
အကြာကြီး မတ်တတ်ရပ်တာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ ထိုင်တဲ့အခါ ခြေထောက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ မြ§င့်ထားလို့ရအောင် ခုံပု တစ်ခုပေါ်မှာ တင်ထားပါ။ ခြေထောက်ဖောရောင်မှု သက်သာ စေဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်စောင်းပြီး လှဲလျောင်းပါ။
အနားယူပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း လေ့ကျင့်ခန်း အသင့်အတင့်လုပ်တာ ကြောင့် ခြေထောက်ဆီသို့ အရည်စီးဆင်းမှု လျော့ကျကာ ခြေ ထောက်ရောင်ရမ်းမှု လျော့ကျစေပါတယ်။ ရေကူးတာက ခြေထောက် ဖောရောင်မှုကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။
အရည်စုဆောင်းမှု မရှိစေရန် သတိထားပါ
သောက်တဲ့ ရေများလေလေ၊ ကိုယ်တွင်း အထူးသဖြင့် ခြေကျင်း ဝတ်နဲ့ ခြေထောက်မှာ အရည်စုပုံနိုင်ခြေလျော့နည်းလေလေ ဖြစ် ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ရေရှစ်ခွက်သောက်တာကြောင့် ဆီးသွားရာ က အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ ပါသွားနိုင်ပါတယ်။
ဆားကို အရသာရှိရုံ သုံးပါ
ဆားအသင့်အတင့်စားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်က အရည် ဓာတ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆားအများ အပြားစားတာက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တဲ့အပြင် ခြေထောက် ဖောရောင်မှုကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
သက်သောင့် သက်သာ ရှိသော ဖိနက်ကို စီးပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခြေထောက်နဲ့ ခြေကျင်းဝတ်ရောင် ရမ်းမှု သက်သာစေမယ့် ဖိနပ်ကို စီးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ခြေထောက်တင်မက လက်နဲ့ မျက် နှာပါ ဖောရောင်နေရင် သတိထားပါ။ ဒါက သွေးတိုးနေသလား၊ သွေးဆိပ်တက်နေသလားဆိုတာ စမ်းသပ်ရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်တာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ
နိုင်ငံခြား ကျောင်းသွားတက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့ လူတွေအတွက် ဒီဆောင်းပါးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ် ၁၅ခုကို စာရင်းပြုထားတာပါ။ ဒီစာရင်းဟာ ၂၀၁၃ခုနှစ်အတွက် ဖြစ်ပြီး QS World University Rankingsမှ သတ်မှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ MIT(Massachusetts Institue of Technology)
၄။ University College London(UCL)
၅။ Imperial College London
၉။ University of Chicago(ချီကာဂို တက္ကသိုလ်)
၁၀။ Caltechလို့ ခေါ်တဲ့ ကယ်လီဖိုးနီးယား နည်းပညာတက္ကသိုလ် (California Institute of Technology)
၁၁။ အမေရိကန်၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်က Princetonတက္ကသိုလ်
၁၂။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဇူးရစ်မြို့က ETH Zurich
၁၃။ University of Pennsylvania
၁၄။ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်နဲ့
၁၅။ အမေရိကန်၊ နယူးယောက်မြို့က Cornellတက္ကသိုလ် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က Listနဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရင် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ဟာ Cambridgeတက္ကသိုလ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဒုတိယနေရာ ရောက်လာခဲ့သလို လန်ဒန်က Imperial Collegeဟာလည်း နာမည်ကြီး Oxfordတက္ကသိုလ်ကို ကျော်ဖြတ်ကာ အဆင့် ၅နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သိသိသာသာ တိုးတက်လာတာ ကတော့ အမေရိကန်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ ရှိတဲ့ Standfordတက္ကသိုလ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အဆင့် ၁၅နေရာကနေ ယခုနှစ်မှာတော့ အဆင့် ၇အထိ တိုးတက်လာပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားတွင် Google Street View မော်တော်ကား ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အင်ဒိုရှိ ဘိုဂါမြို့တွင် Google Street View မော်တော်ကား တစ်စင်းသည် ဘတ်စ်ကား နှစ်စင်းနှင့် ထရပ်ကား တစ်စင်းကို ဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။
Google၏ မြေပုံစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် အချက်အလက်များ စုဆောင်းပေးသော Google Street View မော်တော်ကား တစ်စင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ယာဉ်တိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အင်ဒိုရှိ ဘိုဂါမြို့တွင် Google Street View မော်တော်ကား တစ်စင်းသည် ဘတ်စ်ကား နှစ်စင်းနှင့် ထရပ်ကား တစ်စင်းကို ဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။ ရဲများက ယင်းမော်တော်ကားသည် ဘတ်စ်ကားတစ်စင်းနှင့် လမ်းနေရာ ယှဉ်မောင်းရင်း ယင်းဘတ်စ်ကားကို ဝင်တိုက်ကာ ထိုမှတစ်ဆင့် အခြားဘတ်စ်ကား တစ်စင်းကိုပါ ဆင့်တိုက်ပြီး ထို့နောက်တွင်မူ ထရပ်ကားထံ ဦးတည်သွားခြင်းဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ မည်မျှရှိကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရချေ။
Googleက အင်ဒိုတွင် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းထောက်ပံ့မှု မော်တော်ကားတစ်စင်း ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ "ဒီလို မတော်တဆမှုမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အလေးအနက် သဘောထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒေသဆိုင်ရာ အရာရှိတွေနဲ့ ခုကိစ္စအတွက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်"ဟု Google၏ အင်ဒိုအခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာဌာန အကြီးအကဲ ဗစ်ရ်ှနူမာမွတ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ Googleသည် ၎င်းတို့၏ Street View ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အင်ဒိုတွင် (၂၀၁၂)ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ကတည်းက မော်တော်ကားများ စေလွှတ်ကာ ဓာတ်ပုံများရိုက်ယူရင်း အချက်အလက်များ စုဆောင်းခဲ့သည်။ ယခုနှစ် အစောပိုင်းကလည်း ဘော့ဆွာနာတွင် Google Street View ကားတစ်စင်းက မြည်းတစ်ကောင်ကို ဖြတ်ကြိတ်သွားကြောင်း စွပ်စွဲမှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ထိုစဉ်ကမူ Googleက ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
Breast reduction ရင်သား သေးအောင်လုပ်ခြင်း
• ကျွန်မက အသက် (26) နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်မရင်သား နည်းနည်းကြီးပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒါ သေးအောင် ဘာဆေးသုံးလို့ရလည်း၊ ဆရာကူညီပါ။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့စတိုင်ကို ကြိုက်ပါတယ်ဆရာ။
• စုံအောင်မေးပါရစေ။ အိမ်ထောင်-ကလေး ရှိပါသလား။ ဘယ်-ညာ တူပါသလား။ အရွယ်အစားကြီးတာလား။ အောက်တွဲကျနေသလား။ အကျိတ်စတာ ရှိပါသလား။
• အိမ်ထောင်မရှိပါဘူးဆရာ အောက်နည်းနည်းကျပါတယ်ဆရာ ရင်သားသေးချင်တာပါဆရာ ရောဂါလည်းမရှိပါဘူးဆရာ
• အရပ်က 5.2 လက်မ၊ 136 ပေါင်ရှိတယ်။ အပျိုပါ။ ရင်သားက ပုံမှန်ထက်ပိုကြီးတယ်။ ရင်သားမရှိတော့လောက်အောင် သေးခြင်တာ ကူညီပေးပါဆရာ။
မိန်းကလေးတိုင်း အရွယ်ရောက်တာနဲ့ ရင်သားထွားလာတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရင် ပိုကြီးမယ်။ ကလေးနို့တိုက်လို့လဲ ကြီးမယ်။ ကလေးတယောက်မွေးတခါ ပိုကြီးနိုင်သေးတယ်။ ဒါတွေက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ဖြစ်တယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ အဆီ (တစ်ရှူး) များလို့လဲ နို့ထွက် (တစ်ရှူး) တွေက ပုံမှန်နဲ ရင်သားကြီးတာလဲရှိတယ်။
ရင်သား အရွယ်အစားသေးအောင်၊ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းအောင် Reduction mammoplasty ခွဲစိတ်နည်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ ရင်သားကို ကုသတာမှာ သူ့အလုပ်တာဝန်ကို မထိခိုက်ဘို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။ Nipple-areola complex (နို့သီး + အရောင်ရင့်အဝိုင်း) နေရာက အရေးအပါဆုံး ဖြစ်တယ်။ အလုပ်မပျက်ဘို့၊ အမြင်လှဘို့နဲ့ စိတ်ကျေနပ်ဘို့ (၃) ချက် လိုပါမယ်။
ရင်သားကြီးလွန်းနေတာကို Macromastia ခေါ်တယ်။ ရင်သားက အရွယ်ကြီးနေလို့ လေးလံနေမယ်၊ တဖက်မှာ ဂရမ် ၅ဝဝ ထက်လေးတာလို့ Shnur Scale နည်းက သတ်မှတ်တယ်။ တွဲကျနေရင် ဇက်ကျော၊ ခေါင်း နောက်ကျောပါနာနေနိုင်တယ်။ ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေလဲရှိနိုင်တယ်။ သွေးလှည့်ပတ်မှုနည်းတာ၊ အသက်ရှူရခက်တာ၊ အောက်ခံ အရေပြားကို ထိခိုက်တာ၊ အဝတ်အစားရွေးရတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Breast hypertrophy (Macromastia and Gigantomastia) ခေါ်တဲ့ ရင်သားကြီးလွန်းနေတာမျိုးကို ဆေးနဲ့တော့ ကုမရနိုင်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ချနည်းနဲ့တော့ ရင်သားလဲ လိုက်သေးနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသနည်းကို Reduction mammoplasty, Lipectomy လို့ခေါ်တယ်။ အစဉ်အလာသုံးခွဲစိတ်နည်းကို ၁၉၉ဝ ကတည်းကသုံးတယ်။
Surgical anatomy ရင်သားကို ခွဲစိတ်ခန္ဓာဗေဒအရ (တစ်ရှူး) အမျိုးအစားတွေ များတယ်။
1. Chest wall ရင်ပတ်နံရံက နံရိုးအမှတ် ၂ ကနေ ၆ အထိ၊
2. Pectoralis muscles ကြွက်သား + အရွတ်လွှာ + အရွတ်ပြား၊
3. Lobules (လိုဗြူးလ်)
4. Nipple နို့သီးအဖျား၊
5. Areola အရောင်ရင့်အဝိုင်း၊
6. Milk duct နို့ပြွန်၊
7. Fatty tissue အဆီ၊
8. Glandular tissue နို့ထွက်အိတ်၊
9. Adipose tissue (အဒီပို့စ် တစ်ရှူး)
10. Skin envelope အရေပြား။
Liposuction-only technique အဆီစုပ်ထုတ်နည်းကို ရင်သားအရွယ်အစား သိပ်မကြီးရင် လုပ်နိုင်တယ်။ ရင်သားသေးအောင်ခွဲစိတ်ပြုပြင်နည်းကို ကလေးနို့တိုက်နေသူနဲ့ နို့ဖြတ်ကာစလူတွေကို လုပ်မပေးပါ။
ချုပ်လိုက်ရင် ဆေးနဲ့သေးမယ်ဆိုတာ မယုံပါနဲ့။ သဘာဝ၊ မိမွေးတိုင်းကို ပြင်ချင်တာမှန်သမျှ အဆိုး-အကောင်း ချိန်ဆရမယ်။ (ပလပ်စတစ် ဆာဂျင်) ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။ ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ခေါင်းအေးအေးထားပြီးမှသာ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပွင့်လင်းမှုမရှိဟု တရုတ်အထူးသံကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန်ပြောကြား
အ မျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
တရုတ် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သည် ပွင့်လင်းမှုမရှိကြောင်း အ မျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဝေဖန်ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ နေသည့် တရုတ်ပြည် သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအကြံပေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မစ္စတာဝမ် ယင်ဖန်နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ယင်းသို့ ဝေဖန် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟု မစ္စတာဝမ်ယင်ဖန်က ရန်ကုန် တိုင်းမ်သို့ ပြောသည်။
မစ္စတာ ဝမ်ယင်ဖန် သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မည် သည့်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကို ပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့နှစ်ဦး တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
''ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူက တရုတ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ ပွင့် လင်းမှုမရှိဘူးလို့ ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ သူပြောတာက တစ်ခုခုလုပ်ရင် ပြည်သူတွေကို ပြောဖို့ပါ။ ပြည် သူတွေ သိနားလည်သွားရင် သ ဘောတူမှာပါတဲ့။ စီမံကိန်း တွေ လုပ်ရင် ပြည်သူတွေအတွက် ဘာ တွေအကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ပြည်သူတွေ ကို မြင်တွေ့စေရပါမယ်။ ဒါဟာ သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်''ဟု မစ္စတာဝမ်ယင်ဖန် ကပြောသည်။ မစ္စတာဝမ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသည် အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အေ တို့၏ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ် ဆိုနိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင် ရွက်ရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများအ ပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လည်း သီးခြားတွေ့ ဆုံခဲ့ သည်။
''ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို အလည် လာနိုင်မနိုင်ဆိုတာ ကျွန်တော် အတိအကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှလား။ ဒါမှမဟုတ် မပြီးသေးမီလား မ ပြောနိုင်သေးပါဘူး''ဟု ယင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် ၏တရုတ် နိုင်ငံ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ဥရောပငါးနိုင်ငံခရီးစဉ် သွားရောက်နေပြီး တရုတ်နိုင်ငံ သို့ မကြာမီ အလည်အပတ်သွား နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သုံးသပ်မှုများ ရှိနေသ လို မစ္စတာဝမ်နှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့မှုအပေါ် တရားဝင်သတင်း ထုတ်ပြန်မှုမရှိခဲ့ပေ။ မစ္စတာဝမ်သည် မကြာ သေးမီက မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာ ရောက်ခဲ့ဖူးပြီး ယခုအကြိမ်သည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း သိ ရကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ အပြန်တွင် လိုင်ဇာသို့ သွားရောက် ၍ ကေ အိုင်အေ အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။
ဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းအမှု ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် သင့်မသင့် စက်တင်ဘာ ၂၆ တွင် အမိန့်ချမည်
အား ကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးတင့်ဆန်း မြေအရောင်း အဝယ်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တရား မမှုကို ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် သင့် မသင့်ကို စက်တင်ဘာ၂၆ရက်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရား ရုံး တွင် အမိန့်ချမှတ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ယင်းအမှုကိုစစ်ဆေးနေ သော မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားသူကြီး ဦးကြည်သိန်းက ပြောသည်။
ယင်းအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားသူကြီး ဦးကြည်သိန်းက ''ဒီစက်တင်ဘာ၁၂ရက် ရုံးချိန်းက ပဏာမငြင်းချက်ကို နှစ်ဖက်လျှောက် လဲချက်ကြားနာတဲ့ရုံးချိန်းပါ။ အဲ ဒီအပေါ်မှာ တရားဥပဒေနဲ့အညီ ၂၆ရက် အမိန့်ချမယ်။ တရားရုံး အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက် ပေးရမှာပါ။ ဒီအမှုကိုဆက်စစ်ဖို့ သင့် မသင့် အမိန့်ချမှာပါ။ တရားရုံးအနေနဲ့ ဘယ်လိုအမှုမျိုးပဲ ဖြစ်နေပါစေ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နဲ့အညီလုပ်ရင် အမှုတွေကို လက် ခံစစ်ဆေးပေးပါတယ်။ open court ပါ။ မည်သူ မဆို လာ ရောက်နားထောင်လို့ရပါတယ်'' ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါအမှု အတောအ တွင်း တရားရုံး စစ်ဆေးဆဲဖြစ် သည့် အချင်းဖြစ်ပစ္စည်းကို တရား မဝင်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ကာလတန်ဖိုး ထက်များစွာ လျော့နည်းဖော်ပြ ခြင်း၊ မမှန်မကန် စာချုပ်ချုပ်ဆို ခြင်းတို့ကြောင့် တရားလိုအမှုသည် များ ရသင့်ရ ထိုက်ခွင့်ရှိ သော အ ကျိုးစီးပွားများ နစ်နာဆုံးရှုံးသည့် အတွက် စာချုပ်စာတမ်း ချုပ်ဆို ထားခြင်းမှ တရားမဝင်ကြောင်း ပယ်ဖျက်ပေးစေလိုမှုနှင့် အကျိုး စီးပွားကြားကာလ အမြတ်အစွန်း ရလိုမှု စွဲဆိုထားခြင်းကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး တရားရုံး မှ ဥပ ဒေနှင့်အညီ အမိန့်ချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါအမှုတရား လို ဦးစိုးဝင်းမိုးက ပြောသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့် ပတ်သက် ၍တရားပြိုင်ဦးတင့်ဆန်း၏ကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးချစ်မြင့် က ''ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကိုပဲ ခံယူသွားမှာ ပါ။ ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး'' ဟု မန္တလေးတိုင်း ဒေ သကြီး တရားရုံး တွင် စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် အဆို ပါ အမှုရုံးချိန်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းမ် နေ့စဉ်သတင်းစာသို့ ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက် ညနေ ၂ နာရီခွဲက ဒိုက်ဦးမြို့နယ် သပြေတန်းကျေးရွာအုပ်စု ရောင်နီဦး ကျေးရွာအင်ကြင်းစုပိုင်းနေ အဖ ဦးမောင်လွင်၊ အမိ ဒေါ်ဌေးတို့မှ သတ္တမမြောက်မွေးဖွားသော မိန်းကလေး ကိုယ်အလေးချိန် ၆ ဒသမ ၅ ပေါင်ရှိ မွေးကတည်းက ခြေလေးချောင်းပါဝင်သော ကလေးငယ်တစ်ဦးကို အရပ်သားဖွားဖြင့်နေအိမ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ဒိုက်ဦးဆေးရုံသို့ ညနေ ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကလေးသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီး ခွဲစိတ်မှုပြုနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က အလှူငွေကျပ်တစ်သိန်း၊ ခရိုင်အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က အလှူငွေကျပ်ငါးသောင်း၊ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဌာနဆိုင်ရာများက အလှူငွေကျပ် တစ်သိန်း၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းက အလှူငွေကျပ် ငါးသောင်း၊ စေတနာရှင်ပြည်သူများက အလှူငွေကျပ် ၇၆ဝဝဝ စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၃၇၆ဝဝဝ တို့ကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ဒိုက်ဦးပြည်သူ့ဆေးရုံမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှစ်ဦးလိုက်ပါလျက် ရန်ကုန်မြို့ ကလေးဆေးရုံကြီးသို့ ည ၇ နာရီ မိနစ် ၂ဝ တွင် သုခကာရီကရုဏာလက်များအသင်း(ဒိုက်ဦး)၏ လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထီပေါက်ပြီး လာမထုတ်သည့် ဆုငွေ သန်း ၃၈၀ ခန့် ရှိနေ
အစိုးရ၏ အောင်ဘာလေထီကို ပေါက်ခဲ့သော်လည်း လာမထုတ်သည့် ဆုလက်မှတ်ပေါင်း ၁၄၅၀ ခန့်ရှိပြီး စုစုပေါင်း ဆုကြေးငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၈၀ ခန့်ပင်ရှိကြောင်း အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသိန်းနိုင် က မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ထိုဆုငွေများကို ယခုလမကုန်မီအထိသာ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ရာ သတ်မှတ်ချိန်ကျော်လွန်သွားပါက နိုင်ငံပိုင်ဘဏ္ဍာငွေ အဖြစ် သိမ်းဆည်းတော့မည်ဟုလည်း သူကဆက်ရှင်းပြသည်။ ထို့ကြောင့် “ထီထိုးပြီး ထီတိုက်ကြပါ” ဟု သူက တိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
“အများအားဖြင့် ဆုသေးတွေ လာမထုတ်တာများတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း ဘဏ္ဍာငွေအဖြစ်သိမ်းတော့မယ့် တစ်ရက်အလိုမှာမှ လာထုတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်” ဟုလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ သားကောင်းရတနာထီဆိုင်ပိုင်ရှင်က ထီပေါက်သော်လည်း မထုတ်ဖြစ်ကြသည့် ဆုလက်မှတ်အများစုသည် မင်္ဂလာစုံတွဲအမျိုးအစား ထီလက်မှတ်များထဲတွင် ရောပါပေါက်ကြခြင်း ဖြစ်သဖြင့် သေချာ မတိုက်ကြည့်ကြဘဲ ပေါက်မှန်းမသိကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ “မင်္ဂလာစုံတွဲထဲမှာဆုကြီးတွေလည်း ပါလာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သေချာတိုက်စေချင်တယ်” ဟုလည်း ဆိုသည်။
ကျပ်တစ်သိန်းဆုမှ စတင်၍ ပါဝင်သော ထီပေါက်မဲစာရင်းကို ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အခွန်ဦးစီးရုံးများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများ၊ မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးရုံးများ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးရုံးများတွင် ကြော်ငြာသင်ပုန်းများဖြင့် ထုတ်ပြန်ပေးထားပြီး အင်တာနက်မှလည်း http://www.irdmyanmar.gov.mm/ ၀က်ဆိုက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း အောင်ဘာလေဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
အောင်ဘာလေဌာနတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးထီဆုဖြစ်သည့် ကျပ်သိန်း ၁၅၀၀ ဆုကိုပင် တစ်နှစ် ကျော်ကြာသည်အထိ လာမထုတ်သူရှိနေပြီး ထိုဆုကိုလည်း ယခုလကုန်အထိသာ စောင့်ဆိုင်းထုတ်ပေးမည်ဟု အောင်ဘာလေဌာနမှ ယခုလဆန်းတွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
နန်းမြင့် | Mizzima - News in Burmese
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Fast Burst Camera App အသုံးပြုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် (15.9.3013) Update လေးပါ
ဒီဆော့ဝဲလေးက ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကင်မရာရှေ့မှာဖြစ်ပျက်သွားသမျှကို တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ ပုံ ၃၀ ခန့်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
လျှပ်တစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တာကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ application လေးပါ။
မှာလေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
Download>>>mirrorcreator (or) zippyshare (or)hotfile
ဧရာဝတီနဲ့ ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ရေကြီး မန္တလေးတိုင်းရေဘေးဒုက္ခကြုံ
ဧရာဝတီနဲ့ ဒုဋ္ဌဝတီ မြစ်ရေလျှံမှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်း အတွင်းမှာ ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး အိမ်ခြေ ထောင်နဲ့ချီ ရေမြုပ်ကုန်တဲ့အတွက် အတော်လေး ဒုက္ခရောက်နေကြ ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။ ရေဘေး ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ဓမ္မာရုံတွေမှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အဆင်ပြေသလို လောလောဆယ် ခိုလှုံနေကြပြီး ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်း ထိထိရောက်ရောက် မရကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေမလွတ်တဲ့ မြို့နယ်တွေနဲ့ ရွာတွေမှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မနန္ဒာချမ်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းကစလို့ မိုးများပြီး ဧရာဝတီနဲ့ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ရေဟာ စိုးရိမ်ရေမှတ်အထက်ကို ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက် မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာ ရေကြီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ ဒီကနေ့ ၃ ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ရေဟာ ဆက်လက်မြင့်တက်လာပြီး မန္တလေးနဲ့ စစ်ကိုင်းကိုသွားတဲ့ အဓိက လမ်းမကြီးကို ရေလွှမ်းတဲ့အတွက် ယာဉ်အသွားအလာတွေ အတော်လေး ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်လို့ မန္တလေးဒေသခံတွေက ပြောပြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေကြီးမှု အဆိုးဆုံးနေရာ တခုဖြစ်တဲ့ အမရပူရမြို့နယ်တွင်းမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရေဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ မန္တလေးဒေသခံ သတင်းထောက်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဆန်းယုကျော်က ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။
“ဧရာဝတီက နည်းနည်းလေး ပြန်ကျတယ်။ ဒုဋ္ဌဝတီကတော့ မကျဘူးပေါ့နော်။ ရေကကြီးနေတုန်းပဲ။ ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် စစ်ကိုင်းနဲ့ မန္တလေးသွားတဲ့လမ်း တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် ကားလမ်းပေါ်ကိုတောင် ရေကျော်နေတာတွေဖြစ်နေပြီ ဒီနေ့။ အဲ့ဒီ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်းက အသွားလမ်း၊ အပြန်လမ်းရှိတာ။ အခု အပြန်လမ်းက ရေကျော်နေတာဆိုတော့ အသွားလမ်းတခုတည်းကိုပဲ သွားလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်က နည်းနည်း စိုးရိမ်ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီလမ်းတွေက ကျဉ်းတယ်နည်းနည်း။ ကားနှစ်စီးရှောင်လို့ သိပ်မကောင်းဘူး။ ဆိုးတာက ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကြောင့်မို့လို့ ခုနပြောတဲ့ အမရပူရမြို့နယ်တွင်းက ဆိုးတယ်။ တောင်သမံကန်ပတ်လမ်းနှစ်ခု ရေကျော်နေပြီလေ။ အဲ့ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အနီးတွေ၊ တရုတ်တန်းကြီးရပ်ကွက်တို့၊ တရုတ်တန်းလေးတို့၊ ပြီးလို့ရှိရင် မြစ်ငယ်ဟိုဘက်က ရွာပတ်ဝန်းကျင် တော်တော်များများက အိမ်ခြေပေါင်း ထောင်ချီပြီးတော့ကို ရေမြုပ်နေကြတာ အခုက ကျနော်တို့စာရင်းထဲမှာဆိုရင် ရွာပေါင်း ၃ဝ လောက်ရှိတယ် ခန့်မှန်းခြေ။ အိမ်ခြေပေါင်းက ထောင်နဲ့ချီတယ်။ ကျနော်တို့ လောလောဆယ် ရေမြုပ်တဲ့ဘက်တွေ လက်လှမ်းမီသလောက်ရောက်တာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေမှ သူတို့ကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရဆိုရင် အိမ်ခြေထောင်ချီပြီးတော့ကိုရှိတယ်။ ဒုဋ္ဌဝတီကြောင့် ရေလျှံတာက ပိုဆိုးတယ်။”
ဒါ့အပြင် တချို့တဲအိမ်တွေဟာ အိမ်ခေါင်မိုးအထိ ရေမြုပ်ကုန်တဲ့အတွက် လမ်းဘေးမှာဖြစ်သလို နေနေကြရသူတွေ ရှိသလို တော်တော်များများကတော့ နီးစပ်ရာ ဘုရားကျောင်းကန်တွေမှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ခိုလှုံနေကြရတာတွေ လည်း ရှိတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပြပါတယ်။ ဒီရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက် တချို့လူမှုကူညီပေးရေး အသင်းတွေ က တနိုင်တပိုင် ရေသန့်ဗူးတွေ၊ အစားအသောက်တွေ ကူညီပေးနေတာရှိပေမဲ့ ထိရောက်တဲ့ အကူအညီတွေတော့ မရသေးသလို ရေကြီးတဲ့ တချို့ဒေသတွေက စာသင်ကျောင်းတွေလည်း ပိတ်ထားရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုဆန်းယုကျော်က ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ အခုလောလောဆယ်ကတော့ သူတို့ဟာသူတို့ နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေအိမ်နဲ့ နီးစပ်ရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့၊ ဓမ္မာရုံတို့မှာ နေနေကြတာများတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး သီးသန့်ဖွင့်ပေးတာမျိုးတော့ မရှိသေးဘူး။ ဒီနေ့တော့ သူတို့ လူကြီးတွေ သွားကြည့်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ အဓိက လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေက ကူညီပြီးတော့ အစားအသောက်တွေ ဝေဖို့တို့၊ ခုနပြောတဲ့ သောက်သုံးရေတွေ ဖြန့်ပေးဖို့တို့ စီစဉ်နေတယ် ဒီနေ့တော့။ တခြားတော့ ထူးထူးထွေထွေ စခန်းဖွင့်ပေးတာမျိုးတို့ ဘာလုပ်ပေးတာ၊ ညာလုပ်ပေးတာ လောလောဆယ် အခြေအနေမှာတော့ မရှိသေးဘူး။ လောလောဆယ် နေစရာ၊ စားစရာတောင် သူတို့ မကူညီနိုင်တာ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စကတော့ ပိုတောင်မှ ဆိုးသေးတယ်။ ဘာမှကို မလုပ်ပေးသေးတာ လောလောဆယ်။
အဲ့ဒီ တချို့ဒေသတွေကတော့ သူတို့ပြောပုံအရဆိုရင် အခါတိုင်းတွေလည်း ၀င်နေကြပေါ့နော်။ စောင့်ကြည့်တဲ့အဆင့်ပဲလားတော့ မသိဘူး။ ကျန်းမာရေးကိစ္စကတော့ ဘာမှကို မလုပ်ပေးသေးဘူး။ တချို့ကျောင်းတွေဆိုရင် စာသင်ဖို့ ပိတ်ထားတယ်။ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်ဆိုရင် မနက်ဖြန် စာမေးပွဲဖြေရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းထဲမှာ ခုနပြောသလို တံတားတွေဘာတွေ ထိုးပေးနေတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဖို့တော့ မရွှေ့ဘူးလို့တော့ ပြောတယ်။ တခြား အခြေခံကျောင်းတွေကတော့ ရွာကျောင်းတွေပေါ့ဗျာ အဲ့ဒီကျောင်းတွေကတော့ လောလောဆယ် ပိတ်ထားတယ်။”
ဒါ့အပြင် ဧရာဝတီမြစ်တွင်း တရွာနဲ့တရွာကို ဆွမ်းခံကြွရတဲ့ သံဃာတော်တွေအနေနဲ့လည်း နေ့စဉ်အသုံးပြုတဲ့ တံတားတွေ ရေကြီးတာကြောင့် လှေတွေကို အသုံးပြု ဆွမ်းခံကြွနေကြရပါတယ်။ တောင်သမံဘက်မှာတော့ ဈေးဆိုင်တချို့ ပိတ်ထားရတဲ့ အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုငြိမ်းဝင်း က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ရောင်းအားကျတာပေါ့အမရယ်။ ဒီဘက်ကတော့ အမ သုံးဆိုင်လောက်တော့ ပိတ်ထားရတယ်။ ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကတော့ အပေါ်တွေကြီးပဲ ဖွင့်ကြတယ်လေ။ အောက်ဆိုင်တွေက ရေ၀င်နေတာ။ ရေက လူတရပ် ကျော်ပြီဗျ။ အင်းဘေးမှာနေနေတဲ့ ဒေသခံတွေကတော့ အကုန်လုံး တက်ပြေးရတာပေါ့အမရယ်။ ရေက သူက နေ့ချင်းရော ညချင်းရော ၀င်တာဆိုတော့လေ။ အင်းနဲ့လွတ်ရာကို ပြေးကြရတာပေါ့။ သူတို့ကတော့ မိုးကာပြင်တဲလေးတွေနဲ့ ဖြစ်သလို နေကြရတာပေါ့။ ရေကလည်းတိုး၊ အပေါ်ကလည်း မိုးရွာဆိုတော့လေ သူတို့မှာ နည်းနည်းလေး အနေအထိုင်လေးတွေ ကျပ်တည်းတာပေါ့။”
အင်းဝဘက်မှာတော့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို လည်ပတ်ခွင့်မပေးတော့ဘဲ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကို မှီခိုနေရတဲ့ နယ်ခံဈေးသည်တွေ၊ မြင်းလှည်းတွေလို လက်လုပ်လက်စားသမားတွေလည်း ဝင်ငွေထိခိုက်တာကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်လို့ အင်းဝဒေသခံတချို့က ဗွီအိုအေကို ပြောပြပါတယ်။ လောလောဆယ် ရေမဝင်နိုင်အောင် အာဏာပိုင်တွေက ကာထားပေးတဲ့ သဲအိတ်တွေပေါ်တောင် ရေကလျှံလာပြီမို့ မြစ်ရေတွေမကျဘဲ မိုးဆက်လက် ရွာနေမယ်ဆိုရင် ဒီထက် အခြေအနေပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။
Posted by drmyochit Monday, September 16, 2013, under နည်းပညာ |2comments
တကယ်တော့ အကောင့်လုပ်တာမရဘူးဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံကနေလုပ်နေတယ်လို့ facebook ကယူဆတော့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့စစ်ဆေးတော့ မြန်မာကနေ လုပ်ရင်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်၊ နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းဖုန်းကို အကူအညီတောင်ပြန်တော့လည်း တစ်ခုခုဖြစ်တိုင်း မယုံကြည့်တဲ့အခါတိုင်း facebook က အဲဒီပထမဆုံးထည့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို code ပို့ပေးပြီး စစ်ဆေးလေးရှိတယ် ဒီအတိုင်းလည်း သိပ်အဆင်မပြေဘူးလေ
ပြဿနာရှိရင် ဖြေရှင်းနည်းလည်းရှိရမယ်လေ၊ အဲဒါကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘဲ တခြားနိုင်ငံကနေ လုပ်တာပါလို့ facebook ကို မျက်လှည့်ပြလိုက်ရုံဘဲလေ (သူက မြန်မာနိုင်ငံဆို သေချာစစ်တာကို)
အခုနည်းလုပ်ဖို့အတွက် (ဖုန်းကနေ Gmail အကောင့်လုပ်တာလွယ်တယ်ဆိုတာတော့ မိတ်ဆွေတိုင်းသိမယ်ထင်လို့ မပြောတော့ဘူးနော်)
2. EasyOvpn ကိုဖွင့်လိုက်ရင် အောက်ကပုံအတိုင်း မြင်ရရင်
အပေါ်ဆုံးက Japan ကိုရွေးလိုက်ပါ...
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် တရုတ်နှင့် ဘင်္ဂါလီ မပါဝင်ကြောင်းနှင့် သန်းခေါင် စာရင်း ကောက်ယူရာ၌ ၎င်းတို့ကို အခြားတွင် ထည့်သွင်းကောက် ယူ သွားမည်
ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ပြောကြားနေစဉ်
တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးတွင် တရုတ်၊ ဘင်္ဂါလီနှင့် ပါကစ္စတန် မပါ ၀င်ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူ ရာ၌ ၎င်းတို့ကို အခြားတွင် ထည့်သွင်းကောက်ယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ဆိုသည်။
စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွတ်တော်ရုံး၊ မင်္ဂလာ ခန်းမ တွင် ပြုလုပ်သော ၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင် ရာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်မှုကို ဖြေကြားရာတွင် ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
၀န်ကြီးက "တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ ဘင်္ဂါလီဆိုတာ မပါဘူး။ တရုတ် ဆိုတာ မပါဘူး။ ပါကစ္စတန်ဆိုတာ မပါဘူး။ မပါတဲ့ လူတွေအားလုံးကို အခြား ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ထည့်သွင်းကောက်ယူသွားမယ်။ ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ မပါရင် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူး" ဟု ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီးက လက်ရှိတွင် နိုင်ငံသားကတ် ကိုင်ဆောင် ထားသော တရုတ်၊ ဘင်္ဂါလီများနှင့် ပက်သက်၍ "နိုင်ငံသား ဆိုတာ နိုင်ငံသားဖြစ်နေတာကို အသိအမှတ်ပြုတာ။ နိုင်ငံသားက နှစ်မျိုးရှိ တယ်။ မွေးရာပါ နိုင်ငံသားနဲ့ ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဆိုပြီး ရှိတယ်။ မွေးရာပါ နိုင်ငံ သားကို ဘယ်သူမှ ချေဖျက်လို့ မရဘူး။ တချို့က မွေးရာပါနိုင်ငံသား မဟုတ်ဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်နဲ့ ညီတယ်။ သူလည်း နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရှိတယ်။ အဲဒါသည် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားပါ။ တရုတ်၊ ကုလားလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့" ဟု ပြောကြားသည်။
ယခုကောက်ယူမည့် သန်းခေါင်စာရင်းသည် နိုင်ငံသားကတ် ကိုင်ဆောင် ထားခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ထပ်မံပြောကြားသည်။
"သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေးဟာ နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေး၊ လူမှုရေး ဘာနဲ့မှမဆိုင်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ လူမျိုးထဲ မပါရင် တခြားထဲမှာ ပါမယ်။ လူမျိုးပျောက် မသွားဘူး" ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြော ကြားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီများကို သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေးအတွက် Third Party အဖြစ် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများက ကြားခံပြီး ပြောဆိုမှု များ ပြုလုပ်နေကြောင်းနှင့် UNFPA ၏ အကူအညီဖြင့်လည်း ဆောင် ရွက်နေကြောင်း ၀န်ကြီးက ထပ်မံပြောကြားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ် ၃၀ ရက် ညသန်းခေါင်အချိန်မှစ၍ ဧပြီ ၁၄ ရက်ထိ ကောက်ယူသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
"မိုးကြိုးအပစ်ခံရတဲ့ ကလေးတွေက နားမော်ရွာက ငါးတန်းကျောင်းသူတစ်ယောက်၊ ခြောက်တန်းကျောင်း သူ တစ်ယောက်၊ နောင်ကံကောင်းကျေးရွာမှ ငါးတန်းကျောင်းသူတစ်ဦး စုစုပေါင်း သုံးဦးပါ။ တခြား ကလေးတွေက အကြောတွ နာကျင်တယ်ဆိုပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ခဲ့ကြတာပါ။ ဆေးရုံတက်တဲ့ ကလေးတွေက အကုန်သက်သာကြပါတယ်။ ကလေးတွေ တော်တော်ကြောက်သွားတယ်" ဟု နောင်ပိုအောင်ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ခဲ့သူ ကိုအောင်စိုးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ မြို့နယ်၊ ခရိုင်အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများ၊ ပညာရေးမှူးများ၊ မြို့ နယ်အထောက်အကူပြု အဖွဲ့များ သွားရောက်ကူညီ ပေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ "အဲဒီကျောင်းမှာ အရင်နှစ်က လည်း ကျောင်းအိမ်သာကို မိုးကြိုးပစ်တာ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ကျောင်းကို မိုးကြိုးလွှဲတပ်ဆင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒီနယ်မှာရှိတဲ့ တခြားကျောင်းတွေကိုလည်း လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်" ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးကပြောကြားသည်။
"ဒီဒေသမှာ မကြာခဏ မိုးကြိုးပစ်တာ ခဏခဏ ကြုံရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့ သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပါ။ မနေ့ညနေပိုင်းက နောင်ပိုအောင် ဆေးရုံမှာ နားမော်ရွာ ကလူတွေ အကူအညီ ပေးတဲ့သူတွေ အပြည့်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့လည်း စိတ်မကောင်းဘူး။ ကျောင်းမှာ ဒီနေ့ သူတို့ကျောင်း ရဲ့ ပွဲတစ်ပွဲရှိတယ်။ အခုတော့ စိတ်မကောင်းစရာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီပါ့။ မိုးကြိုး အန္တရာယ်အကြောင်း အသိပညာ ပေးသင့်နေပါပြီ" ဟု နောင်ပိုအောင်ကျေးရွာမှ ကိုမျိုးဇော်က ပြောကြားသည်။ နားမော်ကျေးရွာသည် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် မာန်ဟုန်အုပ်စုအတွင်းတွင် တည်ရှိပြီး နောင်ပိုအောင်ကျေးရွာမှ မိနစ် ၂၀ ခန့် ဆိုင်ကယ်စီး၍ သွားရကာ လူနာများကို အဆိုပါကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှကားဖြင့် နောင်ပိုအောင် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
နျူစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု လုံးဝကင်းရှင်းသော နိုင်ငံအဖြစ...
ဆယ်ကျော်သက် အိမ်မက်နဲ့ လက်တွေ့ဘဝ ထပ်တူကျတယ်ဆိုတဲ့ ...
အမေရိကန်မယ်အဖြစ် အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အလှမယ် ပထမဆုံးအကြိ...
အွန်လိုင်း အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့် ၁၂ နှစ်သမီး ကိုယ့်...
ကျောက်ဖြူ နှင့် အမ်းမြို့နယ် တွင် တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည...
အင်ဒိုနီးရှားတွင် Google Street View မော်တော်ကား ယ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် တရုတ်စီးပွ...